अहिलेसम्म नसुल्झिएको प्रश्नः से”;क्समा कसलाई बढी आनन्द हुन्छ ? महिलालाई कि पुरुषलाई ? – Cn Chautari
माघ १६, २०७८ आइतबार 240
संसारमा स्त्री र ।
पुरुषबीचको सं’भो’गलाई धर्मसंग जोडीएको छ । त्यतीमात्र होईन पुरानो मान्यताअनुसार सहवास गर्नु सन्तान उत्पादन गर्नुमात्र हो । तर सं’भोगलाई केवल सन्तान उत्पादनसंग जोड्नु र त्यसबाट पाउने आनन्दलाई नजर अन्दाज गर्नुमात्र हो ।
यदि प्राचीन समयदेखि नै सेक्सलाई केवल सन्तान उत्पादन संग जोडेको भए आज बिश्वको जनसंख्याको कल्पनासम्म हामी गर्न सक्दैन थियौं ।ब’ला’त्कार र बे’श्या’वृत्तीको नामसम्म हामीले सुनेका हुँदैन थियौं होला । यसबाट पनि यो प्रष्ट हुन्छ कि से”क्स केवल सन्तान जन्माउन गरिदैन भनेर ।
यो शारीरिक आवश्यकता परिपूर्ती गर्ने माध्यम पनि हो । आउनुहोस् यहाँ हामी चर्चा गरौं स्त्री र पुरुषमा कसले धेरै से”क्सको च’रम आनन्द प्राप्त गर्नसक्छ भनेर ।हामी सबभन्दा पहिला महाभारत र त्यसपछि ग्रिक युनानको धर्मग्रन्थको बिश्लेषण गर्नेछौं ।
एकपटक युधिस्ठिर आफ्ना पिताम्मह भिष्मलाई प्रश्न गर्छन्, ‘हे तात श्री, म एउटा ठुलो दुबिधामा छु, मलाई केही दिन देखि एउटा कुण्ठाले ब्यग्र बनाएको छ । प्रश्न यो हो की, सं’भोग गर्दा सबभन्दा धेरै स्त्री वा पुरुष कसले आनन्द भोग गर्दछ ।
यसपश्चात भिस्मपिताम्महले एउटा कथा भनेर सुनाए जुन यसप्रकार छ ।भंसस्वाना नाम गरेको एउटा राजा थिए, राजा अत्यन्त न्याय प्रेमी र जनप्रेमी थिए तर उसका कुनैपनि पुत्र थिएनन् अथार्त ती राजा निःसन्तान थिए । पुत्र प्रप्त होस भनेर राजा र उसकी पत्नी सकरोले एउटा धार्मीक अनुष्ठान ।
गरे जसको नाम थियो ‘अग्निस्तुता’ जुन हवनमा केवल अग्नि देवता को पुजा र जयजयकार गरिएको थियो । यस अनुष्ठानबाट देवराज इन्द्र अत्यन्त क्रोधीत हुन पुगे । क्रुद्ध इन्द्र देवता कुनै एउटा मौका खोजीरहेका थिए जसले गर्दा ।
भंसस्वाना राजाले कुनै ग’ल्ती गरोस र उसलाई श्राप दिन सकियोस भनेर तर अत्यन्तै मृदभाषी भएकाले राजाले कुनै गल्ती गरेका थिएनन् ।
Prevयो मितीमा MCC पासको सहमतिको लागि नरेन्द्र मोदि नेपाल आउदै ।
Nextभीम रावलको प्रश्नः देउवा नेपालीको प्रधानमन्त्री कि विदेशीको ?